Mmetụta nke Igwe Igwe Igwe Na-ekpuchi Anya na Nchedo Nche - OMG Solutions
Mmetụta nke Ahụ Cameraị Isi Ahụ na Nchebe Nche
N'ụbọchị ọ bụla na-agafe, ọnụọgụgụ ụwa a na-abawanye. Nke a na - enye mmụba dị elu na teknụzụ na sayensị. Ugbu a ụbọchị, anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ ọrụ ebube dị anyị nso. Ihe ndị a na-eme ka ndụ anyị dịkwuo mfe. Ebe ọnụ ọgụgụ ndị isi nke obodo na-abawanye ụba, a ga-enwe mmụba dị ukwuu na ọnụ ọgụgụ mpụ. Ndi uwe ojii obodo gha aghata nsogbu kwa ubochi. Maka ịdịrị ha, sayensị enyerela anyị aka site n'inye anyị Ahụ Worn Cameras.
Mmetụta Ọkpụ Ahụ Ara Worn na ndị ọrụ uwe ojii
Ahụ Nwa Ara ahụ nyere aka nke ukwuu na ndụ onye uwe ojii kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na anyị hụrụ nke ọma, mgbe ahụ anyị ga - ahụ ọtụtụ uru dị na ngwaahịa a. Ahụ Nwa Ara ahụ nyere aka nke ukwuu na ndụ onye uwe ojii kwa ụbọchị. Ọ na-eme dị ka anya nke atọ n'ụzọ site na ịbawanye n'echiche nke onye ahụ. Enwere ike ikwu ya n'ihi na mgbe ụfọdụ mmadụ anaghị ahụ obere nkọwa zuru ezu gbara ya gburugburu. Mana iji igwefoto ahụ, ọ nwere ike ịhụ nke ahụ ugboro ugboro na-eme ka ọ dịrị ya mfe ịkọwa obere nkọwa. Ya mere, anyị nwere ike ikwu na ọ na-eme ka ndị uwe ojii na-arụ ọrụ ọma.
Ndi nche nwere ike iji igwefoto ndi nwoke na achapu?
Enwere ike iji kamera ahụ mebiri emebi maka ọtụtụ ebumnuche. Dị ka anyị tụlere na mbụ, o nwere ọtụtụ uru. Ọ na-amụbawanye anya nke anya site n’inye anya ọzọ n’ụzọ. Vidiyo a na-edekọ nwere ike mee ka ndị nche dị mfe n'ọtụtụ ụzọ mana ọ bụrụ na anyị na-ekwu n'ozuzu, anyị ga - ahụ na ojiji igwe eji eme ihe n'ahụ na ndị nche abụghị otu ihe nke ndị uwe ojii.
Agbanyeghị, enweghị iwu a kapịrị ọnụ nke machibidoro ndị nche nchekwa iji kamera eji eyi. Companieslọ ọrụ nwere ike inye ndị nche ihe eji igwe eji eyi ha. Ma a ga-enwe ọghọm ya ma ọ bụrụ na ndị nche.
Kedu ihe dị iche n’ihe banyere ndị nche?
Dịka anyị pụrụ ịhụ na ndị nche nchekwa nwere ebumnuche dị iche iche ma e jiri ya tụnyere ndị uwe ojii. Ọ dịghị ha mkpa ịga ebe ndị ọzọ. Ọzọkwa, ha anaghị aga ebe ọ bụla maka nyocha. Yabụ, kamera eji eyi bụ ihe dabara adaba maka onye uwe ojii kama iji ndị nche. Agbanyeghị, ọ bụrụ na onye nche na-esoro ụfọdụ ndị na-eme ihe ike ma ọ bụ ndị na-apụnara mmadụ ihe, mgbe ahụ igwefoto ahụ na-eyi ahụ ga-eweta nsonaazụ kacha mma site na ịdekọ ihu ha. Mana usoro nke ịkwadebe onye nche nwere igwefoto ahụ kpuchie anya n'ọtụtụ ụlọ ọrụ ahụbeghị.
Gịnị kpatara ọtụtụ ụlọ ọrụ ejibeghi igwe onyonyo eyi ha na nche:
Anyị ahụbeghị ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji igwefoto ahụ yijiri uwe ha. Enwere ụfọdụ ihe kpatara nke a. Ka anyị leba anya na ha:
Nsogbu bụ isi nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enweghị ike ịkwadebe ndị nche ha na kamera ndị ahụ eyiri bụ ọnụahịa dị elu nke igwefoto ndị a. Site na teknụzụ na-apụta, ọnụahịa nke ịkwadebe ndị ọrụ nchekwa na kamera ahụ na-adịwanye ọnụ mana ọ bụghị obere. Otu igwe eji ese igwe eji eme ihe nwere ike ibu ihe di oke ahia. Ọ na-efu ihe dị ka $ 700- $ 800. Kedu ihe kpatara mkpa ụlọ ọrụ ji azụrụ igwe foto dị oke ọnụ maka ndị nche ha? Ndị uwe ojii na-echekwa otu nsogbu ahụ.
Ngalaba ndị uwe ojii nke ala buru ibu nke chọrọ nnukwu igwefoto maka ndị ọrụ. Anyị nwere atụmatụ na igwefoto ọ bụla maka onye ọrụ na-akwụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 800 nke bụ ibu arọ maka ngalaba ahụ. Ya mere, ọ bụ nnukwu ihe ndọghachi azụ nke iji igwefoto eyi ahụ.
Ihe ọzọ na-ekweghị ndị ụlọ ọrụ ahụ ịzụta kamera ndị yi ahụ maka ndị nche ha bụ ihe dị mkpa. Dị ka anyị tụlere na mbụ, enweghị mkpa igwefoto eyi uwe n'oge ọrụ onye ọrụ. Agbanyeghị na ọ na - emetụta arụmọrụ nke ndị nche mana ọ bụghị ihe ọ na - emetụta ndị uwe ojii. N'ihi nke a, ụlọ ọrụ ahụ echeghị mkpa ọ dị ịzụta igwefoto ahụ yi ya maka ndị nche ha.
O doro anya na ntoputa nke teknụzụ ọhụụ na netwọọ mmekọrịta agbanweela etu ndị mmadụ si ele ihe nzuzo ha anya, mana ndekọ igwefoto nke otu ahụ na-eme nwere ike inye ohere iji teknụzụ nnabata ihu.
Ojiji Ahụ Worn Cameras na-enye ndị nche ohere idekọ ọnọdụ dị mwute, kamakwa idekọ ihu ndị mmadụ na-agafe na nke ahụ ga-abụ ihe ọjọọ maka nzuzo ha. Banyere nke ahụ, ụfọdụ ụlọ ọrụ mmanye iwu emeela ihe ma kwupụta ya megide nzuzo nke ndị mmadụ. Nke a, n'ihi ya, adịghị mma maka ụlọ ọrụ ahụ.
O zughị ezu inye otu onye uwe ojii kamera ahụ wee gwa onye uwe ojii ka ọ gaa were ya. Edebere iwu maka iji igwefoto ndị ahụ (mgbe agbanyụrụ ma ọ bụ gbanyụọ igwefoto, mgbe ị ga-eme ka ndị mmadụ mata na a na-edekọ ha, otu esi ebugo data, wdg) kwesịrị ndị ọzụzụ na iwu ahụ.
Enwere ike iji kamera ndị ahụ mebere ahụ maka nyochaa omume nke ndị nche. Ọ na-eme ka onye nlekọta na-achịkwa nke ọma. N'ịmara na a na-edekọ ihe niile, ọ gaghị na-eme ndị ọzọ iwe. N'otu oge ahụ, onye na-agwa onye nche okwu ga-anwa ịkwanyere ndị mmadụ ugwu ma nyekwa ya ọzụzụ ka ọ na-edekọ. Ya mere, ụlọ ọrụ nwere ike iji igwefoto ndị a nyochaa ndị nche ha.
Nzuzo 5256 1 Echiche Taa